के तपाई दशैंमा अझ सुन्दर र आकर्षक देखिन चाहनुहुन्छ ? त्यसोभए यी उपायहरु अपनाउनुहोस
काठमाडौं, २८ असोज । गाउँघर तथा शहर सबैतिर अहिले चाडपर्वको रौनक बढेको छ । चाडपर्वमा लामोसमयपछि आफ्ना र आफन्तसंग भेटघाट हुनेभएकालेपनि आफुलाई सुन्दर र अझै आकर्षक देखाउने चाहाना सबैमा हुनु
काठमाडौँ, २७ असोज / मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनका कारण बाथरोगले दिनानुदिन बढी व्यक्तिलाई ग्रसित पार्दै छ । विश्व बाथरोग दिवशका अवसरमा नर्भिक अस्पतालले गरेको जनचेतनामूलक कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार सबै
अमला निकै लाभदायी स्वास्थ्यका लागि, यस्ता छन् फाईदाहरु
काठमाडौं, २७ असोज । अहिले अमलाको सिजन छ । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अमलालाई एकदमै लाभदायी फलका रूपमा लिइन्छ । खासगरी अमिलो खान मन पर्ने मानिसका लागि यो एकदमै प्यारो फल पनि
होसियार ! कतै तपाई सडेको मासु त किन्दै हुनुहुन्न ? अनुगमनमा देखियो यस्तो अचम्म्
बुटवल, २६ असोज । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको संयुक्त अनुगमन टोलीले नगरका विभिन्न मासु पसलहरुमा विक्रीका लागि राखिएको एक क्विन्टल बढी गुणस्तरहीन मासु नष्ट गरेको छ । शुक्रबार अनुगमनमा पुगेको टोलीले वडानम्बर
मलेरिया रोकथामको औषधि गाउँमा छैन, स्वास्थ्य केन्द्रमा अलपत्र
बाजुरा, २६ असोज । मलेरिया रोकथामका लागि छर्किनु पर्ने औषधि तीन महिनादेखि बाजुराको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा थन्किएको छ । ‘सेभ द चिल्ड्रेन’को सहयोगमा जिल्लाको उत्तरी भेग बूढीनन्दा नगरपालिकाको कोल्टी
आज विश्व वाथरोग दिवस मनाइँदै, वाथरोग कसरी थाहा पाउने ?
काठमाडौं, २६ असोज । आज विश्व वाथरोग दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । शरीरका हाडजोर्नी, माशपेशी, छाला, नशा दुख्ने समस्या वाथरोग हो । बाथ रोगको प्रकार सय
जिल्लाकै व्यवस्थित रसुविधा सम्पन्न ‘बर्थिङ सेन्टर’ सञ्चालनमा
नवलपरासी, २५ असोज । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा जिल्लाकै नमूना प्रसूतिगृह सञ्चालनमा आएको छ । सुनवल नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा नगरपालिका–१ मा प्रसूति गराउनका लागि जिल्लाकै व्यवस्थित रसुविधा सम्पन्न ‘बर्थिङ
मानसिक स्वास्थ्य समस्या विश्व मानव समुदायकै एक गम्भीर समस्या हो: स्वास्थ्यमन्त्री यादव
काठमाडौँ, २५ असोज । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले अशिक्षा, बेरोजगारी, बसाइसराई, सामाजिक विखण्डन र प्राकृतिक प्रकोपसहित गरीबीका कारण नेपालमा मानसिक रोगीहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका
सन् २०२० सम्म उपचार गर्न सकिने अन्धोपन २५ प्रतिशत घटाउने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौं, २५ असोज। सन् २०२० सम्म उपचार तथा रोकथाम गर्न सकिने अन्धोपनलाई २५ प्रतिशत घटाउने लक्ष्य लिइएको छ । यस लक्ष्यलाई पूरा गर्न नेपालमा तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानलगायत आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा
आयातमा रोक लगाएपछि नेपालमा आयुर्वेदिक औषधिको अभाव
काठमाडौं, २४ असोज । करीब छ महिना अघि आयातमा रोक लगाएपछि नेपालमा आयुर्वेदिक औषधिको अभाव भएको छ । आयुर्वेदिक औषधिको अभावसँगै नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामी भने मर्कामा परेका छन्